Murashaxa madaxweynaha Soomaaliya Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ka digay macquulnimada in doorashada madaxweynaha ay dib u dhacdo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMurashaxa madaxweynaha Soomaaliya Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ka digay macquulnimada in doorashada madaxweynaha ay dib u dhacdo
November 23, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Murashaxa madaxweynaha Soomaaliya, Jibriil Ibraahim Cabdulle. [Sawirka: Puntland Mirror]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Murashaxa madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka digay dib u dhigida wakhtigii loo qorsheeyay doorashada madaxweynaha isaga oo daliishanaya sida gaabiska leh ay u socoto hanaanka doorashooyinka aqalka hoose.
Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah murashax madax-banaan ayaa sidoo kale sheegay in guddiga doorashada aysan iclaamin ujeedada dib u dhigida doorashada.
“Waxay u muuqataa in doorashadii madaxweynaha aan la qaban doonin wakhtigeedii sababtoo ah ilaa iyo hadda ma muuqdaan cadaymo muujinaya in doorashada aqalka hoose wakhtigeedii la dhammaynayo,” ayuu yiri Jibriil.
Hadalka murashaxa ayaa imaanaya iyadoo walaac laga qabo in doorashada ay 30-ka bishaan November qabsoomi Karin.
Ilaa iyo hadda 115 cildhibaan oo aqalka hoose ah iyo 43 aqalka sare ah ayaa lasoo doortay. Aqalka hoose ayaa ka kooban 275 xildhibaan halka aqalka sare uu koobanyahay 54 xildhibaan. Maamulka sheegay in uu goostay ee Somaliland ayaan wali la dooran xildhibaanadoodii aqalka hoose iyo aqalka sare.
Qaramada Midoobay ayaa Isniintii lasoo dhaafay sheegtay in lacago badan oo laaluush ah loo adeegsaday doorashooyinka aqalka hoose iyo aqalka sare.
June 30, 2017 Ku dhawaad boqol maleeshiyo Al-Shabaab ah oo tagay deegaanada miyiga ah ee hoostaga magaalada Ceerigaabo
Pakistan oo sheegtay in sagaal qof oo shacab ah ay ku dhinteen kadib markii gaari ay saarnaayeen ay ku dhaceen madaafiic ay Hindiya kasoo tuurtay xadka Kashmir
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka Guinea, sida uu sheegay wasiirka arrimada dibada. Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimada dibada Soomaaliya, oo maanta oo Khamiis ah jir jaraaid ku qabtay Muqdisho [...]